Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.3.2.7 olunozwela
Olunye ulwazi ukuthi izinkampani kanye nohulumeni babe kuyinto ebucayi.
Izinkampani zomshuwalense zezempilo iminingwane ulwazi mayelana ukwelashwa eyatholwa amakhasimende abo. Lolu lwazi lungasetshenziswa ucwaningo ebalulekile ngempilo, kodwa uma yaziwa ke engase iholele engozini ngokomzwelo (isib, ukuphoxeka) kanye nokulimala komnotho (isib, ukuphelelwa umsebenzi). Kunokuba ehlukile, abaningi big imithombo idatha babe nolwazi ozwelayo. Ubunjalo sensitive lolu lwazi kuyingxenye yesizathu sokuthi big imithombo idatha ngokuvamile ezingafinyeleleki (ezichazwe ngenhla).
Enye indlela ukuthi abacwaningi azame ukubhekana nalesi simo iwukuba de-ukukhomba datasets ukuthi kunokwaziswa okubucayi. Kodwa, njengoba Ngizobonisa ngokuningiliziwe eSahlukweni 6 (Ethics) le ndlela kungagcini sina ngezindlela hhayi kakhulu yilabo kokubili ososayensi bezenhlalo nososayensi idatha.
Ekuphetheni, idatha imithombo big namuhla (nakusasa) ngokuvamile anezici eziyishumi. Abaningi izakhiwo-big okuhle, njalo-on, futhi nonreactive-zivela iqiniso izinkampani yobudala digital nohulumeni bayakwazi ukuqoqa idatha ngezinga kwakungenakwenzeka ngaphambili. Futhi, eziningi ezimbi izakhiwo-akuphelele, engafinyeleleki, non-omele, ukukhukhuleka, algorithmically ngajabha, engafinyeleleki, ongcolisayo futhi ebucayi-zivela iqiniso lokuthi idatha is hhayi eqoqwe ngokokukhetha kwabacwaningi kubacwaningi. Ukuqonda lezi izici a esidingekayo sokuqala ekufundeni kusukela idatha big. Futhi, manje siphendukela ukuba ngicwaninge amasu singasebenzisa ngale datha.